Hiran State - News: Maxaad ka taqaan qaabka uu shacabka koofurta Somaliya u xasuuqo hogaamiyahii ururka Shabaab oo hada hogaaminaya garab Shabaab ka tirsan Ahmed Godane?
Maxaad ka taqaan qaabka uu shacabka koofurta Somaliya u xasuuqo hogaamiyahii ururka Shabaab oo hada hogaaminaya garab Shabaab ka tirsan Ahmed Godane?
Somalia:- Ahmed ow Godane oo dhalasho ahaan ka soo jeeda deganada waqooyi amaba dhulka hada loogu yeero Somaliland ayaa u muuqdo shaqsi ay ka muuqato colaad iyo naceyb aan qarsooneyn ee uu u hayo shacabka koofurta Somaliya kedib markii warbixin aanu ka soo aruurinay qeybaha kala duwan ee shacabka koofurta Somaliya iyo dad isaga aqoon u leh mudadii uu hogaaminayey ururka Shabaab ee dagaalka kula jiray shacabka Somaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koofurta Somaliya.
Godane oo ah sida la sheegay shaqsi qabiili ah waxuu koofurta Somaliya kaka howl galaa labo arimood. 1- Kedib markii uu ka mid noqday nin isaga la dhashay iyo shaqsiyaad waalid ugu aadan oo ay dowladii Kacaanka ku dishay xeebta Jasiira aaqirkii sidee dameeyadii ayuu aad uga carooday xiligaasi uu ka da yaraa inta uu maanta jiro waxii markaasi ka danbeeyena waxuu ku fikiri jiray qaab uu ugu aari karo dadkaasi.
2-Godane waxaa sdidoo kale koofurta Somaliya ku haya amaba u joogaa arimo siyaasadeed oo qeyb ka ah ineysan degin koofurta Somaliya maadama shacab badan oo ka qaxay koofurta dhaqaalo iyo ganacsiyo waaweyn ku heystaan degaanada uu ka soo jeedo oo hadii ay Mogdisho iyo koofurta Somaliya noqdaan nabad ay adkaaneyso iney shacabkaasi sii joogaan halkaasi.
Ahmed Godane oo hada ah hogaamiyaha garab ka mid ah ururweynahii guud ee Shabaab ayaa hada xoogiisa iskugu geeyey gobolada Sh/hoose iyo J/dhexe kedib markii uu lumiyey dhalinyaro badan oo ka soo jeeda degaanada kale ee koofurta Somaliya oo iyagu hada u muuqda iney noqdeen tusbax go,ay oo mid midka kale meel ku sheega la arag iyagoo hada u kala dhuumanaya sidii ay ula heshiin lahaayeen TFGda iyo shacabka degaanada ay ka soo jeedaan oo ay horey u dhibeen.
Warar xaqiiqada u dhaw ayaa sheegaya in Godane uu weydiistay qabiilada Biya Maal iyo Dirta Koofureed ciidamo si uu uga kaaftoomo ciidamadii kale ee ka tagay isaga. sidoo kale wax yaabaha aad loogu xasuusan doono Godane mudo waxey noqon doontaa inuu shacabkii ku noolaa deganada koofureed u diiday iney tabcadaan beeraha kana joojiyey gargaarkii dibada ay ka helayeen taasi oo maanta keentay macaluusha baahsan ee dalka ka jirta siiba koofurta Somaliya maadama uu isku arko shacabkiisu iney wax baranayaan nabadna heystaan qaar ka mid ah xaasaskiisa iyo caruurtiisa oo sida la sheegay ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan magaalda Burco.
Inkasta oo ay dadka qaarkii hada dareemeen colaada uu Godane u hayo shacabka koofurta Somaliya waxaa iyaduna xusid mudan in xiliga dadka lagu xasuuqay xeebta Jaziira meelo badan oo dalka ka mid ah ay dowladii Kacaanka ku dhibeysay shacabka Somaliyeed maadamaa ay dowladu dili jirtay amaba xabsi dhigi jirtay cidkasta oo ka hor timaado oo maamulkeeda faraha la gala sidaasi daraadeed Ina Godane dadka uu leeyahay reer koofuraa ika xasuuqa shacbaka Koofur wax shaqo ah kuma lahan ee dowlad ayaa dishay, waana aqli daro in shaqsi sheeganayo diin inuu ficiladaasi ku dhaqmo ayey leeyahiin dadka ku nool koofurta SOamliya oo si wanaagsan u yaqaana Godane.
Godane ayaa hada qorsheynaya marka uu helo tirada ciidamada uu u baahan yahay inuu degaal weyn ku qaado Bay iyo Bakool oo uu ku sugan yahay ninka ay sida weyn iskaka soo horjeedaan Abuu Mansuur isagoo balan qaaday inuu qoortiisa suri doono magaalada Baydhabo kedib markii uu ku eedeeyey amar diido.
Ahmed Godane iyo taageerayaashiisa ayaa hada ku xoogan labadaasi gobol iyagoo u muuqda kuwo ay degaanadaasi u leetahay ahmiyad gaar ah oo ka duwan degaanada kale sida Jubada Hoose oo ay adag tahay inuu kaka howl galo sida labadan gobol,ugu yaraan magaalooyinka Marko, Qoryooley iyo caasimada gobolka Jubada dhexe ee Bu'aale ayuu saldhigiisa ugu weyn ka dhigan doonaa maadama uu hada ku jiro hub aruursi laga dareemayo Shabaabka gudahooda.
Sida muuqata ururkii shabaab dhibtii ay shacabka ku hayeen waxey u weeciyeen iyaga dhexdooda dhawana waxaa laga yaabaa iney si gaadmo ah isku qaarajiyaan iyaga dhexdooda maadama uu hada yaraaday isku socodkooda. sidoo kale Godane ayaa hada diyaarsanaya ciidamo ku filan maadama laga yaabo in madaxweynaha Eritariya oo horey u taageeri jiray kooxahaan wada hadal kula jiro madaxweynaha Ugandha si uu dib ugu soo laabto masraxa aduunka oo sida muuqata laga godoomiyey mudo hore iyadoo ay hadii taasi dhacdo adkaan doonto in hub danbe iyo dhaqaale ka yimid Eritariya soo gaaraan gudaha Somaliya.
La soco bur burka Shabaab iyo sida ay diinta ugu beensheegaan had iyo jeer.
· admin on August 17 2011 21:03:11 · 0 Comments · 2043 Reads ·
14,589,068 unique visits